Ireto ny lalao PlayStation Plus amin'ny Janoary 2017 | Vaovao momba ny gadget
Sony, araka ny fantatrao tsara, dia manana fomba amam-panao manome eo anelanelan'ny lalao video roa sy telo ho an'ireo mpamandrika isaky ny sehatra PlayStation Plus (raha manana azy rehetra ianao dia afaka mahazo lalao video miisa 6). Vonona ny lalao video horaisintsika mandritra ny volana Janoary 2017. Marina fa hanomboka malemy ny taona, na izany aza, tsy maintsy dinihintsika ihany koa fa ny PlayStation Store amin'izao fotoana izao dia misy fihenam-bidy tena lehibe hatramin'ny 60% amin'ny lohateny heverina ho "triple A" izay mety tsy tadiavinao tsy ho azony ary natolotray andro vitsivitsy lasa izay. Andeha hojerentsika hoe inona ireo lohateny omen'ny PlayStation Plus antsika amin'ity volana Janoary 2017 ity.
Voalohany indrindra dia ho hitantsika izay lohateny ho hitantsika amin'ny PlayStation 4, ilay console ho an'ny taranaka ho avy izay omen'i Sony eny an-tsena:
Andro nananganana indray ny tranolay: Fitsangatsanganana sary tsy manam-paharoa, ho hitantsika ny zava-drehetra toy ny sary mihetsika, ary koa ny marina. Tsy maintsy mandamina ny hoavintsika isika ary manana fotoana mahafinaritra amin'ity lalao remaster ity izay tonga amin'ny PlayStation 4 sy PS Vita amin'ny faritra mitovy.
Ity ady ataoko ity: ireo kely: Fitsangatsanganana an-tsary hafa miaraka amina toerana mainty sy fotsy miavaka izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
Titan fanahy: Lalao tsotra misy lohahevitra valo no malemy indrindra amin'ny PS + amin'ity Janoary ity.
Amin'ny konsole hafa dia hanana ihany koa isika Blazerush ho an'ny PlayStation 3, ary koa Ilay Mpamitaka. Ho an'i PS Vita dia hankafizinay Titan Souls, The Swindle, Azkend 2, ary ny Andro Fitoerana Masina Remastered.
Sony dia niloka tamin'ny volana Janoary tany Indies, zavatra izay efa nahazatra antsika, ary izany dia hoe tsy dia misy lalao mahafinaritra loatra toa ny taloha, Batman: Alina Arkham.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireto ny lalao PlayStation Plus amin'ny Janoary 2017